ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ အာဂျင်တီးနားဘောလုံးကစားသမားများ မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ကာကွယ်ရေး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; "Becho"။ ကျွန်ုပ်တို့၏မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့် Off-အသံမားကို့စ Rojo အချက်အလက်နဲ့ရှေ့တော်၌မိမိအသက်တာကိုဇာတ်လမ်းကပါဝင်ပတ်သက်
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိခုခံကာကွယ်အရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့သောငါတို့မားကို့စ Rojo ရဲ့ဇီဝထည့်သွင်းစဉ်းစားပါပြီ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့စတင်ဖို့ကြကုန်အံ့။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
[အပြည့်အဝအမည်] Faustino မားကို့စ Alberto Rojo, La Plata, အာဂျင်တီးနားအတွက်မတ်လ 20 ၏ 1990th ရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူကသူ့ဖခင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ Carlina Rojo ကသူ၏မိခင်နှင့်မားကို့စ Rojo မှမွေးဖွားခဲ့သည်။ သူက, La Plata, 40 မိုင် Buenos Aires (အာဂျင်တီးနား၏မြို့တော်) မှတစ်ဦးဆင်းရဲနွမ်းပါးမွို့၌အယ်လ် Triunfo ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားရာဇဝတ်ဂိုဏ်းနှင့်၎င်း၏ဘောလုံး-မေတ္တာရှင်မြို့သားတို့အဘို့အလူသိများတစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကို, La Plata အတွက် non-ရာဇဝတ်မှုကျရောက်နေတဲ့ဧရိယာ၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း Kickstarter စေရန်တစ်ဦးလေလံမှာတော့မားကို့စ '' မိဘများသူ4တစ်ဦးနူးညံ့သောအသက်အရွယ်မှာလူငယ်ဘောလုံးသမားအဖြစ်မှတ်ပုံတင်တယ်ဘယ်မှာ Estudiantes LP သို့ဆောင်သွားကြ၏။ အောက်တွင်ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်လှပတဲ့ဂိမ်း၌သူ၏ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုယူပြီးအဆိုပါနောက်ခံလူ၏အံ့သြဖွယ်မော်ကွန်းတင်ပြီးရိုက်ကူးသည်။
မားကို့စ Rojo ကထည့်လေ့မရှိအဖြစ် ... "ငါသည်ဘောလုံးကစားခြင်းကိုစတင်ထိုအချိန်တွင်အဖေကားတစ်စီးရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူကဆင်းရဲသားကိုကြီးနှင့်ငါ၏လေ့ကျင့်ရေးငါတို့ဗိမာန်ရန်အလွန်နီးကပ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စက်ဘီးသွားခဲ့ရတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအချိန်ကြာမြင့်စွာစက်ဘီးအားဖြင့်သွား၏။ ငါ့အဖေလမ်းပေါ်မှာသောအရာတို့ကိုရောင်းချရန်နှင့်သူကခရီးစဉ်အတွက်အိမ်မှာငါ့ကိုချီကောက်ဖို့ပြန်လာမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာအတော်လေးရှည်ခရီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့သည်မိမိစက်ဘီးမောင်းနေစဉ်အတွင်းကျနော်တော်တော်နွေးရလိမ့်မယ်! "။ Rojo, လေ့ကျင့်ရေးမှသံသရာကသူ့လေ့ကျင့်ရေးမြေပြင်ကသူ့နေအိမ်ကနေလှည့်ပတ် 20 ကီလိုမီတာတစ်ပတ်လည်ခရီးစဉ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘောလုံးသမားဖြစ်လာသူ၏အိပ်မက်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက်ယဇျပူဇျော၏နံပါတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
"ငါကသူ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတွေ့မြင်နိုင်ကြောင်း" Rojo ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ (သူ၏ဖခင်) ကပြောပါတယ်။ "ငါသည်သခင်၌မြင်ရနိုင်သူတိုင်းဘောလုံးကိုလိုက်မယ်လို့ဆိုတော့သူ့ကိုအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူကအမြဲကသူ့အသက်အရွယ်၏အခြားယောက်ျားလေးများမှကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ပါတယ်။ " အဆိုပါကလပ် (Estudiantes) လူငယ်နည်းပြဂါဗြေလကို San Millan လည်းမားကို့စ '' အလားအလာအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကလပ်မှာမိမိအခွက်တဆယ်ဖွံ့ဖြိုးကူညီပေးခဲ့သည်။ "နည်းပညာအသူကောင်းတစ်ဦးကစားသမားဖြစ်ခဲ့သည်" စန်း Millan ကဆိုသည်။ သူကဆက်ပြီး ..."သူကအကောင်းကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အကောင်းတစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမြဲသူ့ကိုအကြောင်းကိုထွက်မတ်တပ်ရပ်သောအရာသည်အမြဲတမ်းပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဖို့ကြောင်းဆန္ဒဖြစ်ခဲ့သည်။ ကစားသူတစ်ဦးအဖြစ်မားကို့စ Alonso ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ 18 သို့မဟုတ် 19 ခဲ့သောအခါသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။
မိမိအဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏အဆုံးမှာမားကို့စပြီးသား, ဒေသခံခြမ်းနှင့်အတူအာဂျင်တီးနားပထမတန်း၌နေသော Estudiantes, ကစားခဲ့သည်။ မားကို့စရဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တိုက်ပွဲများနှင့်အတူပျက်သောစပါးဖျင်းခဲ့ကြသူအစောပိုင်းကျောင်းကထွက်။ လုယက်မှု, တိုက်ပွဲများနှင့်ပင်သေဆုံးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘောလုံးသည်သူ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကအနည်းငယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကသူဟာအမြဲဘောလုံးကွင်းကိုပြု၏။ အမြဲတမ်းဘောလုံး, နေ့နှင့်ညဉ့်။ အတော်များများကအကြိမ်ပေါင်းများစွာမားကို့စတိုက်ပွဲတွေသို့ရလိမ့်မယ်။ သူကအလွန်အမျက်ထွက်တော်မူရရှိသွားတဲ့နှင့်လည်းအများအပြားပဋိပက္ခများကိုရှိပါတယ်။ ဤလမ်းများပေါ်တွင်စံပါပဲ။ သငျသညျခိုငျမာဖြစ်ဖို့ရှိသည်။
မိမိအနှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်နှစ်အတွင်း Copa Libertadores အနိုင်ရပြီးနောက်မားကို့စလစ္စဘွန်းအားကစား, ထို့နောက် Spartak Moscow နှင့်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အာဂျင်တီးနားဂျာမနီမှကျဉ်းမြောင်းစွာဆုံးရှုံးအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌လမ်းကိုနောက်ဆုံးထံသို့ ဝင်. သူကယ့်ကိုဘရာဇီးအတွက် 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်မှာမိမိအမှတ်အသားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဒီကနေဖုန်းခေါ်ရန်ဦးဆောင် မန်ယူ။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Rojo Eugenia Lusardo, လစ္စဘွန်းတွင်အခြေစိုက်နေတဲ့အတွင်းခံမော်ဒယ်မှလက်ထပ်သည်။ Rojo အားကစားက CP မှာအခါနှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများအချင်းချင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက်မှာအဖြစ် Eugenia Dama က de Copas လို့ခေါ်တဲ့လစ္စဘွန်း-based အတွင်းခံကုမ္ပဏီတခုမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ သူမသည်အမှန်တကယ် enamored အလှတရား၏အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစုံတွဲသည်တစ်ဦး၏သမီး Morena (သူတို့ '' ပို '' ကိုခေါ် affectionally သူ) ဟုခေါ်တွင်ရှိသည်။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်မော်ဒယ်ရည်းစား Eugenia Lusardo နှင့်အတူ Rojo ရဲ့ဘဝတစ်ကမ်ဘာကွာဆင်းရဲသား barrio အတွက်အာဂျင်တီးနားရဲ့ခက်ခဲတဲ့ကြီးပြင်းရာမှဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Affair: ဒီဇင်ဘာလ 2014 ခုနှစ်, Rojo သူတစ်ဦးနိုက်ကလပ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူဇာတ်ခင်းနေတယ်။ သူကငွေညှစ်၏သူမ၏စွပ်စွဲနှင့်ပုံပြင်၌သူ၏နာမကိုအမှီထုတ်ဝြေခင်းသတင်းစာများကိုရပ်တန့်ဖို့တရားရုံးမိန့်ထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ သူ၏နာမကိုအပေါ်တရားရုံးမိန့်ကြောင့်အခြားအဘောလုံးသမားများအတွက်ကိစ္စသံသယနိုင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှဧပြီလ 2015 အတွက်ရုတ်သိမ်းပေမယ့် Rojo ၏ပုံရိပ်များများလွှတ်ပေးရန်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ရာအရပျ၌တည်ခဲ့သည်။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
ဘောလုံးအယ်လ် Triunfo ၏ခက်ခဲတဲ့လမ်းများပေါ်တွင်ဘဝကနေမားကို့စသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုထဲကသူ့မိသားစုကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ အောက်တွင်သည်သူ၏စည်းစိမ်ဥစ္စာများနှင့်အောင်မြင်မှုအကြီးမြတ်ဆုံးအကျိုးခံစားသူသည်မားကို့စနှင့်သူ၏အမေ, Carlina ၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
'' Titi '' ချစ်စနိုးမားကို့စ Rojo ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏, အယ်လ် Cruce နှင့်အတူဟောင်းတစ်ဦးအပျော်တမ်းကစားသမားကြီးနှင့်လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာဂိမ်းသို့မိမိသားကိုတွန်းအားပေးကူညီပေးခဲ့သည်။ ပြင်သစ်နှင့်နှမသုံးယောက် - - Noelia, Micaela နှင့် Sol သူ၏ဖခင်မားကို့စနှင့်သူ၏လေးမောင်နှမအစာကျွေးဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သောလမ်းတစ်လမ်း-ထောင့် churros ရောင်းချသူအဖြစ်သာ£ 2.50 တစ်ရက်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အောက်တွင်သူတို့၏ကလေးဘဝနေ့ရက်ကာလ၌မားကို့စနှင့်သူ့မောင်နှမသုံးယောက်၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
မားကို့စ Rojo ရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုနဲ့ကံကြမ္မာအသတ်ခံရခံရကြောက်ရွံ့ခြင်း၌နထေိုငျအိမ်ပြန်သူ့မိသားစုကို left သိရသည်။ အာဂျင်တီးနားထဲမှာရာဇဝတ်သားပြီးသားကသူ့အဖေကိုတက်ရိုက်နှက်နှင့်သူ၏မိခင်ရဲ့ခေါင်းကိုသေနတ်ထားကြပြီ။ သူ့ရဲ့ကလေးဘဝနေအိမ်သို့ဝင်စီးပြီးတဲ့သူတဦးတည်းသီးခြားဂိုဏ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကသူ၏ကိုးနှစ်အရွယ်ညီမ Sol နှင့် Godson, သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးကိုသတ်ပစ်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
သူတို့ကသူမကြာခဏသည်မိမိချစ်ရသူပြန် funnels ထားတဲ့ပေါင်သန်းပေါင်းများစွာအချို့ကိုအပေါ်မိမိတို့လက်ကိုရရှိရန်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်။ မိမိအဧရာဝင်ငွေရရှိမှုနာမည်ကြီးတစ်ဦးမန်ယူအသင်းသန့်စင်ခြင်းဖြင့်အများပြည်သူခဲ့သောအခါဤမြို့သို့ရောက်လေ၏။ မားကို့စရဲ့အစ်ကို Franco နဲ့အစ်မ Noelia သတ္တိရှိရှိသူတို့လယ်ပြင်ပေါ်မားကို့ရဲ့အောင်မြင်မှု၏သားကောင်များဖြစ်ကြောင်းမိသားစုရဲ့အကွောကျရှံ့သောအကြောင်းကိုအထဲကပြောပြီ
The Sun နှင့်အတူတစ်ဦးသီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း, သူတို့ကသူသြဂုတ်လအတွင်းကမန်ယူပူးပေါင်းကတည်းကမိသားစုဟာသူတို့ရဲ့တံခါးကိုမဖွဆေိုရပ်တန့်နှင့်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ထားပြီးကြပါပြီဘယ်လိုသို့ပြောသည်။ , La Plata အတွက်သူမ၏နေအိမ်ထဲကနေပြော Noelia said: "ကျနော်တို့ကအမြဲကြောက်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မားကို့စကိုပစ်မှတ်ထား။ သူတို့ကအိမျတျောကိုသိလူတိုင်းသိတယ်။ ကျနော်တို့တိုင်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့်ကျွန်တော်ယူရှိသည်
မည်သူမဆိုမှတံခါးကိုမဖြေကြဘူး။ ရှေ့, နောက်ကျောနှင့်တံခါးအပေါ်ထပ် - ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြတင်းပေါက်အပေါ်ဘားထားခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာမားကို့စ Rojo ရဲ့မိသားစုဖြစ်ခြင်းအန္တရာယ်ပါပဲ။ ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလနေရာဖြစ်သည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စွန့်ခွာမည်မဟုတ်။ " သူမကအကြမ်းဖက်ပေးနေတာ၏နောက်ဆက်တွဲဖေါ်ပြခြင်းသူမ၏တွစ်တာအကောင့်ပေါ်မှာရုပ်ပုံ posted သောဂိုဏ်းသူမ၏မိခင်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်အဘ၏အိမျပွခွငျးအားဖွငျ့ဒီတော့ဒေါသဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းတစ်ဦးကအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်မားကို့ရဲတရားခံရှာတွေ့တောင်းဆိုခဲ့ - သူတို့
လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်တော့မှ - နှင့်တိုက်ခိုက်ရှုတ်ချဖို့တွစ်တာမှယူခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ထံမှငွေသားမျှအနိုင်အထက်အားအသစ်သောကြံစည်မှု။ ဒါဟာမားကို့စနွေရာသီအတွက်ယူနိုက်တက်ပူးပေါင်းသောအခါ, စာချုပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဇာတိမြို့အတွက်တိုက်ခိုက်မှုစွပ်စွဲချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အလုပ်-ပါမစ်ပြဿနာတက်ကျင်းပခဲ့သည်သတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - ဆုံးရှုံးအခြေအနေများစီမံခန့်ခွဲ
ပြင်သစ်ကသူ့အစ်ကိုပြောကြားခဲ့့သည်က ... : "သူကအမြဲ Veron ဖြစ်လိုခြင်းနှင့်အိမျတျော၌ဘောလုံးကစားသောအခါသူ့ကိုဖြစ်ဟန်ဆောင်လိမ့်မယ်။ သူ့အဖွဲ့အရေးပါသောပွဲစဉ်များတွင်ရှုံးနိမ့်ထားပြီးလျှင်မားကို့စမကြာခဏတစ်ကြိမ်နေ့ရက်ကာလအဘို့မိမိအပေါ်တစ်ဦးခန်း၌ထိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အာဂျင်တီးနား 2014 ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲအတွက်ဂျာမဏီမှပျောက်ဆုံးသွားပြီးနောက်မားကို့စနီးပါးကိုတစ်ပါတ်မှုအတွက်မည်သူမဆိုမပြောတတ်သို့မဟုတ်မမြင်ရလိမ့်မယ်။ သူသည်အများသောနေ့ရက်ကာလအဘို့စိတ်ဆိုးစေနိုင်ပါတယ်။ သူကအမျက်ထွက်ရှိနေမည်။ ဤအချိန်တွင်သူသည်တယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခံရဖို့, ပြီးတော့သူကအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်လိုအပ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပြီးနောက်အဲဒီအကြောင်းငါးရက်သူ့ကိုခေါ်သွားတယ်။ သူကသူ့ဖုန်းကိုပိတ်သူမည်သူမဆိုမှစကားမပြောပေ။ ဒါပေမယ့်သေး, မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်မှာဖြစ်ပျက်မထားပါဘူး။ "
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ - အဆိုပါအငြင်းပွားမှု
မားကို့စတစ်ချိန်ကစကားတော်နဲ့သူ့ရဲ့ Instagram ကိုစာမျက်နှာပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးအရှင်ကို Pablo Escobar ၏ရုပ်ပုံပို့စ်တင်ပြီးနောက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာစေသော: "သာလျှင်ငါနှင့်အတူအဆာလောင်မွတ်သိပ် သွား. ငါအသက်တာ၌တစ်ချိန်ချိန်မကောင်းတဲ့အချိန်မှတဆင့်သွားသောအခါအကြှနျုပျကိုအနား၌ရပ်နေသောသူတို့အားငါ့စားပွဲ၌စားရကြလိမ့်မည်။ "
မားကို့စ, ရင်ဆိုင်သောအခါ, post ကိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီမှုမရခဲ့တဲ့ဆက်ပြောသည် said: "ကျွန်မစကားကိုနှင့်စကားများကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရုပ်ပုံတက်ထားတော်မူ၏။ " Peharbs, ဇအီးရဲ့ TV ပေါ်မှာ Escobar ရဲ့ဘဝပုံပြင်ကိုတှေ့မွငျမြားနှငျ့တိုများ likes ။ ဒါဟာမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့သူကဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာထောက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုရှိနေသော်လည်းမားကို့သူ၏အမြစ်တို့တွင်မေ့လျော့အပေါင်းတို့နှင့်သူ၏မိသားစုကသူ၏အောင်မြင်မှုကနေအကျိုးအမြတ်ရှိသည်ဟုသေချာစေသည်မရှိသေးပေ။
သူကသူ့ဘဝအတွက်ကတခြားစိတ်အားထက်သန်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာဖြစ်သည့်ဖြစ်ပျက်ကြပါပြီမပြုစေခြင်းငှါ '' သီခငျြးဆို ''။ မားကို့စသူတစ်ဦးဘောလုံးသမားဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဆိုတော်ဖြစ်ချင်တယ်။ တကယ်တော့သူကဒီလိုသီဆိုအပေါင်းတို့နှင့်အတူပါတီများ, ရှိသမျှမိသားစုဖြစ်ရပ်များမှာခြင်းသည်ကခုန်။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
မားကို့စ Rojo ကသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
မားကို့စ Rojo ရဲ့အားသာချက်များ: သူက (ဘောလုံးမတိုင်မီသူ၏ပထမဦးဆုံးအခွက်တဆယ်), သနားကြင်နာတတ်တဲ့အနုပညာအလိုလိုသိ, နူးညံ့သိမ်မွေ့, ပညာရှိများနှင့်အလွန်ဂီတပါပဲ။
မားကို့စ Rojo ရဲ့အားနည်းချက်များ: ဆုံးရှုံးမှုကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။
အဘယ်အရာကိုမားကို့စ Rojo likes: တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်း, အိပ်, ဂီတ, အချစ်ဇာတ်လမ်း, အမြင်အာရုံမီဒီယာနှင့်ရေကူး။
မားကို့စ Rojo နှစ်သက်မှုမရှိကဘာလဲ: သာမန်, ဝေဖန်ခံနေရ, အတိတ်သူ့ကိုနှင့်မဆိုကြင်နာ၏ရက်စက်မှုသရဲခြောက်သောပြန်လာမယ့်။
မားကို့စကအရမ်းဖော်ရွေဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့မကြာခဏအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုး၏ကုမ္ပဏီအတွက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပါ။ သူလည်းကြိုးများနှင့်ဘာမှပြန်ရရှိရန်မျှော်လင့်ခြင်းမရှိဘဲ, အခြားသူများကိုကူညီအမြဲဆန္ဒရှိသည်။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ငှက်ပျောသီးစားခြင်း
ကွင်းပေါ်မှာငှက်ပျောအစာစားခြင်းအားဖြင့် - မားကို့စ Rojo Rostov နှင့်အတူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 's ယူရိုပါလိဂ်လည်စည်း၏တဦးတည်း၏အဓိကစကားပြောရမှတ်တွေထဲကပေးအပ်!
အဲဒါက ... ဖြစ်တယ် ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို'' s ကိုစုစုပေါင်းကျေးဇူးတင်စကားအပေါ်ယှဉ်ပြိုင် 2-1 ၏လေးပုံတပုံ-ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်မှတိုးတက်တဲ့သူခြမ်း Mata ကို '' s ကိုဒုတိယတစ်ဝက်သပိတ်။ အက်ရှလေယန်း Rojo သူ့ကိုကစား၏လယ်ပြင်ပေါ်နေချိန်တွင်စားရန်အဘို့အ peeled ငှက်ပျောသီးလိုက်တာနဲ့မြင်ကြသောအခါပရိသတ်များနှစ်ယောက်စလုံးအစုံ mystified ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဟိုဆေးမော်ရင်ဟို အဆိုပါပုံမှန်မဟုတ်သောမျက်မှောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ရလဒ်, ယခုနှင့်ရာသီ၏အဆုံးအကြားတစ်ဦးကိုတိုးမြှင့်အခန်းကဏ္ဍဖွယ်ရှိသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ်လာသည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်။
မော်ရင်ဟိုကိုပြောသည် BT အားကစား: "မားကို့စအကြိမ်ပေါင်းများစွာမောပန်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ သူကသူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခုလိုအပ်ပါတယ်သိတယ်။ သူကရိုးရိုးငှက်ပျောသီးအဘို့ဟုမေး၏။ အဆိုပါငှက်ပျောခွအေနကေိုကျွန်တော်တစ်ဦးကစားသမားရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခွအေနေကိုလေးစားရန်ရှိသည်မှာအားလုံးရယ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။ "
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ထိုးကွင်းထိုး
Rojo ပြီးသားကိုဖတ်ရှုရာ, သူ့ခြေထောက်တက်တူးအညီ, အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်မည် '' မာန 'နဲ့' ဘုနျးတျောကို '' ။
မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Rabona ရှင်းလင်းခြင်း
ဒါပေမယ့် 'ဤသဖြင့်စီရင်တော်Rabona'' ကမ္ဘာ့ဖလားမှာရှင်းလင်းရေးသူသည်မိမိလက်ျာခြေမ၌များစွာသောယုံကြည်မှုမရှိပါ။ မာကု Lawrenson helpfully သူကတက် messed ချင်ပါတယ်လျှင် "ဟုသူကမြည်းကြည့်မယ်လို့" အကြံပြုထားသည်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မားကို့စ Rojo ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
Mason ဆို Greenwood ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Diogo Dalot ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောဖပြည်၌ Deplay ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဒန်နီဝဲလ်ဘတ်ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်